Wordpress မှာ enter and leaves welcome page လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါ — MYSTERY ZILLION
Wordpress မှာ enter and leaves welcome page လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါ
March 2012 edited March 2012 in Wordpress
အားလုံးပဲ့ဗျာ ဖြေပေးကြပါဗျာ ကျွှန်တော် burmesex.com မှာလို welcome warning page လေး လုပ်ချင်လို့ ပါ ကျွှန်တော့ domain က index.php ကိုပဲ့သိတယ် ဗျာ ကျွှန်တော် index.html ကို root floder ထဲ ထည့်ကြည့်ပြီးပါပြီ domain က index.php ကိုသာပြတယ်၊၊ wordpress 3.3.1
အကို အဲဒီ link အတိုင်း လုပ်လို့ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် Enter နေရာမှာကျွှန်တော့site ရဲ့ လင့် ကိုထည့် ပေးလိုက်တယ် Leaves နေရာမှာ google.com ကိုထားပေးလိုက်တယ်အားလုံး အဆင်ပြေနေပါပြီ၊၊
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အခုမှ စတာ။ ကျွှန်တော့ Site မှာက အင်္ဂလိပ် & မြန်မာ ပြောင်းတဲ့ plugin ကိုသုံးထား တယ်။။ Translate လုပ်ပေးတဲ့ plugin မဟုတ်ပါဘူး၊၊ မြန်မာစာကတော့ default ပေါ့ဗျာ၊၊ ပြဿနာက မြန်မာကနေ အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်း ရင်အဆင်ပြေပါတယ် မြန်မာစာကို ပြန်ပြီးတော့ ပြောင်း လိုက်ရင် ဟို enter and leaves welcome page ကို ရောက်သွာတယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျွှန်တော် redirection plugin ကိုသုံးကြည့် တယ် ဟိုမြန်မာ link ကိုနောက်ထပ် page တစ်ခုကို redirect လုပ်ခိုင်:တယ်အဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမယ့် welcome page မပေါ်တော့ဘူးဗျာ။ အကြံပေးပါအုံ:ဗျာ
may be problem of language plugin. What plugin are you using for language ?
I am using now plugin called ( Polylang ) .Please forgive me for wasting your time!
My knowledge is not enough to resolve them.
@kyawkya007 , try to change other language switcher plugin